आतंकवादी संगठन आईएसका नेता अल बग्दादी मारिएकै हुन् त ? – सजल सन्देश
आतंकवादी संगठन आईएसका नेता अल बग्दादी मारिएकै हुन् त ?
By Sajal sandesh	 On१३ कार्तिक २०७६, बुधबार ०३:२४
एजेन्सी – विश्व चर्चित आतंकवादी संगठन आईएसका नेता अल बग्दादी मारिएका छन ।
अरूका भनाइमा चाहिँ दक्षिण इराकस्थित अमेरिकी शिविर क्याम्प बुक्कामा चार वर्ष बन्दी बनाइएपछि बग्दादी कट्टरपन्थी भएर निस्किए । सो शिविरमा कैयौँ अल कायदा कमाण्डरहरूलाई राखिएको थियो । सन् २०१० मा बग्दादी इराकमा अल कायदाको नेताका रूपमा उदाए । पछि सो समूह आइएसमा समाहित भएको थियो । सिरियाको अल नुसरा गुटसँग जोडिने प्रयास भइरहेको बेला बग्दादी उक्त सङ्गठनको उच्च नेतृत्वमा उदाए । सन २०११ को अक्टोबरमा अमेरिकाले बग्दादीलाई आधिकारिक रूपमा आतङ्कवादी घोषणा गर्दै उनको पक्राउ वा मृत्यु हुने गरी कसैले सूचना दिएमा एक करोड डलरको पुरस्कार दिने घोषणा समेत गरेको थियो ।